‘प्रेम गीत २’ टिमलाई सुदर्शन थापाको यस्तो झटारो ! « Ramailo छ
‘प्रेम गीत २’ टिमलाई सुदर्शन थापाको यस्तो झटारो !
समय : 12:13 am
निर्देशक सुदर्शन थापा र निर्माता सन्तोष सेनबिच सम्बन्ध सुमधुर छैन । फिल्मी बजारमा यो कुरा सर्वविदितै छ । ‘चंखे शंखे पंखे’ र ‘प्रेम गीत’ मिलेर बनाएका सन्तोष र सुदर्शन अहिले दुई ध्रुव भएका छन् । पूजालाई लिएर सुदर्शनले म यस्तो गीत गाउँछु बनाएका छन् भने सन्तोषले प्रदीपले लिएर प्रेम गीत २ बनाएका छन् ।
दुई साताको अन्तरालमा रिलिज हुन लागेका दुई फिल्महरुको प्रचारात्मक सामग्रीहरु अहिले सार्वजनिक भैरहेका छन् । ‘प्रेम गीत २’ ले सोमबार मात्रै प्रोमो रिलिज गरेको छ । प्रेम मिट गरेरै सार्वजनिक गरिएको ‘प्रेम गीत २’ को प्रोमो निर्देशक सुदर्शन थापाले शुभकामना दिंदै आफ्नो फेसबुक वालबाट सेयर गरेका छन् । ‘प्रेम गीत २’ को प्रोमो सुदर्शनले आफ्नो फेसबुकमा सेयर गर्नुलाई फिल्म वृत्तमा आ आफ्नै तवरले विश्लेषण गरिएको छ ।
धेरैले ‘प्रेम गीत २’ टिमलाई सुदर्शनले ‘फूलको झटारो’ दिएको भन्ने विश्लेषण गरेका छन् । ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ को प्रोमो सार्वजनिक भएर युट्युव ट्रेन्डिङमा आउँदा निर्माता सन्तोष सेनले छेडखानी गर्दै फेसबुकमा स्टाटस पोस्ट गरेका थिए ।